Dawladda Hoose Oo Joojisay Waddo Muhiim ahayd Oo Ay Dayac-tirkeeda Wadday |
Dawladda Hoose Oo Joojisay Waddo Muhiim ahayd Oo Ay Dayac-tirkeeda Wadday
Hargeysa(GNN):-Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, ayaa joojisay dayac-tir ay ku wadday waddada isku xidha madaarka Cigaal International Airport iyo saldhigga dhexe ee Hargeysa oo ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba gacanta ku haysay.
Lama garanayo sababta keentay in haatan la joojiyo waddada oo aan la dhameystirmin, balse Maayarka Caasimadda Hargeysa Mudane Cabdiraxaman Soltelco ayaa horay u sheegay in waddada ay joojin doonaan haddii aanay dadweynuhu ka qayb-qaadan kharashka ku baxaaya waddada.
Dadweynaha caasimadda Hargeysa gaar ahaan xaafadda ay ka socotay dhismaha waddadu ayaa horay u sheegay in aanay wax lacag ah ku darsanayn dhismaha waddada maadaama cashuur laga qaado isla markaana uu madaxweyne Silaanyo hore u ballanqaaday inuu dhisi doono waddadan.
Dhinaca kale, waddadan ayaa inta la dhisay aanay ahayn sidii markii hore qorshuhu ahaa iyadoo dadweynaha hore loogu sheegay in halkaasi laga dhisi doono waddo laami ah oo tayadeedu aad u sarrayso, balse inta yar ee haatan la dhisay ayaa ah mid aan xittaa tayo ahaan wanaagsanayn oo aad u liidata.
Shacabka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan caasimadda dalka ee Hargeysa ayaa cabasho xooggan ka muujiya qaabka loo wado dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan waddooyinka.
Ugu dambeyntii, tallaabadan uu ku dhaqaaqay maayarka caasimadda Hargeysa ee ah inuu joojiyay waddadaas muhiimka ah ayaa niyad-jab ku abuuri karta shacabka ku dhaqan koonfurta magaalada Hargeysa iyo weliba cidkasta oo waddadaas isticmaasha, maadaama ay kamid tahay dariiqyada halbawlaha ee ishu qabanayso.